आज असार २७ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
July 11, 2020 1296
आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै जाने हुनाले नया प्रकृ’तिको काम गरी आम्दा’नी गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । माया प्रेम’मा नजिक हुने तथा नया ठाउ’बाट प्रेम प्रस्ताव आउनेछ । इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सकिनेछ ।
राम्रा कामगर्दा समाजमा स्थापित हुँन सकिनेछ । अध्ययनमा समय दिई आफ्नो विद्यालार्ई निखार्ने सकिनेछ । आटेका तथा चाहेका कामहरु गर्न सकिने तथा साथी’भाइहरुको राम्रो स’हयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ भने घर परिवारमा तपाईँको कामदेखि सबै प्रशन्न हुनेछन् ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको बर्चश्व रहनेछ भने सामाजि’क उत्तरदायित्व बहन गर्ने समय रहेकोछ । साथीभाइ तथा आफन्तको सहयोगमा नयाँ योजना बनाई कार्यान्व’यनको चरणमा लान सकिनेछ । खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुने योग रहेकोछ । भाग्यले साथ दिने हुँदा थोरै लगानिबाट पनि रुपैयाँ पैसा क’माउन सकिने तथा आर्थिक रुपमा सबल हुने ग्रहयोग रहेकोछ ।
स्वास्थ्यमा आउने समस्याका कारण दैनिक का’महरु प्रभावित हुनेछन् । नगर्नु पर्ने का’ममा नै हात हाल्दा व्यवसायिक रुपमा घाटा लाग्नेछ । धन सम्पति तथा पैत्रिक धन हराउन तथा लुटिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पति तथा खनिज पदा’र्थको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला नराम्रा घट्ना घट्न सक्छ ।
आवस्यक पर्दा साथ दिनेहरु प्रशस्त भेटिने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । परिवारका साथ यात्रा’को तय गर्न सकिनेछ । स्थाई सम्पतिको भरपुर प्रयोग गर्न पाइनेछ । नाफा मुलक काम गरि आम्दानी गर्न सकिनेछ भने सेवा मुलक काम गरि नाम पनि कमा’उन सकिने हुनाले मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ ।
प्रतिष्ठित व्याक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि अन्तत तपाईँकै पक्षमा नतिजा आउँदा मन खुसी हुनेछ । पठन पाठनमा अलि मन नजादा गृहकार्यहरु समयमा सकाउन मुस्किल पर्नेछ । र’माईँलो यात्रा हुनेछ भने आफन्त तथा शुभचिन्त’कसँगको भेटले उत्साह जगाउनेछ । प्रणय सम्बन्धमा विश्वास बढेर जाने तथा विवाह मार्फत सम्बन्धलाई लामो समय सम्म टिकाउन सकिनेछ । विवाद प्रतिस्पर्धा’मा विपक्षहरुला’ई हराउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ ।
खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा आउने हुनाले पढ्न लेख्न जोस जाँगर बढ्नेछ । विला’शीताले खर्च बढाएपनि भौतिक सम्पति तथा उपाहार प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । आर्थिक समस्या सुल्झाउँदै शिक्षा तथा बैकिङ क्षेत्रमा लगानि बढा’उन सकिनेछ । वंश बृद्धिको गतिलो योग रहेकोछ भने नोकरीमा बढुला हुने योग रहेको”छ ।
अरुकै काममा समय बित्ने हुँदा आफ्नो काम थाति रहनेछ । विभिन्न योजनाहरु छलफलका लागि ल्याउन सकिने भएपनि सहकर्मिहरुबाट नै विरोध हुनेछ । अध्ययनमा भनेजस्तो सफलता हात लगाउन निकै मेहन’तको जरुरी पर्नेछ । कुनै काम गर्दा गम्भिर हुनुहोला हतार गर्नाले काम बिग्रनेछ । प्रेममा अविश्वास बढ्ने योग रहेकोछ ।
माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । अध्ययन अध्याप’नमा प्रगति गरि गन्तब्य भेटाउन सकिनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकीहरु सँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जा’नेछ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ । छोटो तथा रमा’इलो यात्रा गरि सकारात्मक नतिजा हात लगाउन सकिनेछ । पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जाँगर आउनेछ ।
बोलेर गर्ने कुनै पनि पेशा व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने काउन्सेलिङ,मोटिभेसन जस्ता क्रियाक’लापमा भाग लिन तारिफ योग्ग प्रस्तुति दिन सकिनेछ । कुुटुम्ब,आफन्त तथा नजिकका मानिससँग भेट भई पारिवारिक माहोलामा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर’ प्राप्त हुनेछ । प्रेममा नजिक भई भावना साटासाट गर्न सकिनेछ ।
बिहानको समय मध्ययम रहेकोले अना’वश्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्र’मिकमा दिनभर समय ब्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । मध्यान्हबाट समयमा सुधार हुने हुनाले विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन् भने चाहेको समयमा कामहरु सम्पन्न हुने हुँदा आ’फन्तहरु खुसी हुनेछन् । उत्त’म बस्त्र,मनपर्ने भोजन तथा बिशेष उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ ।
राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेह’रुले समयको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सके मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा कमाउने समय रहेकोछ । नया प्रबृधिको प्र’योग गरि व्यापारलाई विस्तार गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने मेह’नतले गन्तब्य पहिल्याउन सहज हुनेछ ।
Prevराजेश हमालको पक्ष लिँदै कड्किए कलाकार सुशील पोखरेल (भिडियो सहित)
Nextएक प्रेमी जोडीलाई आपत्ति’जनक अवस्थामा भेटेपछि गाउँले’ले बाँधेर कुटे… पूरा हेर्नुहोस्..
कब्जियतले हैरान हुनुहुन्छ ? यो घरेलु विधि अपनाउनुहोस् (शेयर गर्नुहोस्)
प्रधानमन्त्रीसँगै खटिने सुरक्षा-कर्मीको ब्रीफकेसमा के हुन्छ ? पहिलो पटक देखियो यस्तो दृष्य
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, आज कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस्